China Ems PCB Assembly Mepụta na Factory | KAISHENG PCB
N'ígwé: 14 Layer PCB
Isi ihe: Akwa Tg FR-4
Mkpuchi ọla: HASL - Duru n'efu Ofkpụrụ nke Mmepụta: SMT + N'ígwé: 14 Layer PCB
Isi ihe: High Tg FR-4 Asambodo: SGS, ISO, RoHS MOQ: Mba MOQ
Dị derdị Solder: Free-Free (RoHS Dabara) Ọrụ Nkwụsịtụ: Ihe dị iche iche, mmepụta PCB, PCB Assembly Ule: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Nkwado Teknụzụ: DFM efu (Kere maka Nrụpụta) Lelee Ofdị Mgbakọ: Ngwakọta Ngwakọta PCBA Ọkọlọtọ: IPC-a-610d
Isiokwu: PCB Assembly Ọrụ, PCB Assembly Service, PCB Assembly Process, PCB Assembly Manufacturers, PCB Assembly Cost, Cheap PCB Assembly,
Site ọkọlọtọ na omenala PCB fabricgha na turnkey PCB ngwọta, PCBFuture egosiwo onwe ya dị ka onye-nkwụsị ọrụ maka ihe niile PCB.
Gịnị mere anyị ga-eji anyị PCB nzukọ ọrụ?
Anyị na-agba mbọ na-enye pụrụ iche elu-edu ngwaahịa na nnọọ asọmpi ahịa. Anyị ejikọtawo azụmahịa anyị na otu ndị mmekọ dị iche iche iji gboo mkpa ndị ahịa na-agbanwe agbanwe.
Site na ịnye mbadamba sekit ka emechaa eletrọniki akụrụngwa, anyị nwere ndị otu ọkachamara. N'ihi na anyị ga-adịgide adịgide ahụmahụ, anyị nwere ike na-enye ihe kacha na àgwà, nnyefe pụrụ ịdabere, na aku na uba feasibility.
Anyị ga-anapụta gị ngwaahịa ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ PCB emeputa si n'ebe na ahịa.
Otu kacha na mma
A pụrụ ịdabere na nnyefe
Ọrụ otu ụlọ ahịa
Ogologo oge ole ka nnyefe ahụ gafere oge ndị ahịa nyere iwu bọọdụ PCBA?
Oge nnyefe nke PCBA nwere njikọ chiri anya tupu ịrụ ọrụ. Ndị ahịa ahụ kwesịrị ibu ụzọ nye ndị na-esonụ ihe. Enwere ike ịnyefe ngwongwo n'ime ụbọchị 3 mgbe emechara ihe niile. Ọ bụrụ na enwere nhazi DIP, ọ ga-ewe ụbọchị 5-7 iji nyefee. Ọ bụrụ na e nwere iwu chọrọ ngwa ngwa, anyị nwere ike ịgwa ya tupu anyị enwee ike ịme ndokwa ndị ọzọ.
Ozi iji kwadebe maka nhazi PCBA:
1. Standard mmepụta BOM
2. PCB faịlụ;
3. Via faịlụ;
4. Jigsaw Gerber faịlụ;
5. Ọkwa nhazi ọnọdụ;
6. Ndepụta ngwakọta nke ihe SMT n'ihu na azụ, ihe DIP na ndepụta.
Anyị na-anapụta mgbakọ sekit kachasị mma n'oge na n'ime mmefu ego, nke ndị ahịa na-akwado site na ọrụ ndozi na-enweghị isi ma weghachite iwu iji nye ogo dị elu. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ jụọ, nweere onwe gị ịkpọtụrụsales@pcbfuture.com , anyị ga-aza gị ASAP.
Nke gara aga: Njikwa Board biri ebi Circuit Assembly
Osote: Ọrụ Mgbanwe Flex PCB
ọnụ ala PCB nzukọ
Dugara PCB Assembly
PCB nzukọ emeputa
nzukọ PCB nọ m nso
ọrụ nzukọ PCB
PCB n'ichepụta na nzukọ
prototype PCB mgbakọ
ngwa agbanweta PCB nzukọ
Smt PCB Mgbakọ
Smart Home Main Control Board Circuit Mgbakọ